Home » အသားပေး » မှန်ဘီလူး Metadata Standardization မှတစ်ဦးကအဆင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာ
မှန်ဘီလူး Metadata Standardization မှတစ်ဦးကအဆင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာ
က Les Zellan အသုံးပြုပုံ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်ပိုင်ရှင်, ချက်ပြုတ်စက္ခုဗေဒ
NAB ဒီနှစ်မှာမှန်ဘီလူးနည်းပညာမှတ်တိုင်တစ်ခု Panavision, အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံမှာအခါ, အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရောက်ရှိခဲ့ပါသည်, ကို Canon, Blackmagic ဒီဇိုင်း, CW Sonderoptic နှင့် Sony က, ချက်ပြုတ်စက္ခုဗေဒ PL ကနေမှန်ဘီလူး metadata ကိုများစုဆောင်းခြင်းစံဖို့စက်မှုလုပ်ငန်း-defining စီမံကိန်းကိုကြေညာခဲ့သည်နှင့်အပေါ် Panavision တောင်ပေါ်မှာမျက်ကပ်မှန်ကိုရွေးချယ် / i နည်းပညာ protocol ကို။
metadata ကို၏တန်ဖိုးသည်ယခုအခါလုံးဝ archive ကိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအကြောင်းအရာ, ရှာတွေ့ပါနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်လူအားဖွင့်အဘို့အလွန်အရေးပါသည်အဘယ်မှာရှိထုတ်လုပ်မှုအများအပြားဒေသများ, အထူးသဖြင့်သတင်းအတွက်လက်ခံသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့နေဆဲအကြီးအကျယ်ဝယ်ယူဇာတ်စင်မှာသတိမမူဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ဘီလူးကနေတချို့ metadata ကိုအဆင့်ဆင့်စောင့်ကြည့်ဘို့အစုံပေါ်တွင်အသုံးပြုခံရပေမဲ့, ဤမျှလောက်ပိုပြီးကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းသိသာသောအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံကယ်တင်နိုင်လုပ်နိုင်လည်းမရှိ။
130 မှန်ဘီလူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်နှင့်တစ်ဦးသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကျော်ရှိပါတယ်ရာ - ကှတျချစက္ခုဗေဒမှာ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်®များစွာသောအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများအကြား - ငါတို့သည်လွန်ခဲ့တဲ့ 18 နှစ်ပေါင်းန်းကျင်မှန်ဘီလူး metadata ကိုဖမ်းယူ၌ဤလိုငွေပြမှုအသိအမှတ်ပြုခြင်း, တစ်ဦးကိုစုသိမ်းဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပွင့်လင်းစံနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းပေးလိမ့်မယ်လို့ metadata ကို protocol ကိုနှင့်ရှယ်ယာမှန်ဘီလူး data တွေကိုဖန်တီးဖို့ထုတ် ထား. ဝယ်ယူမှ Compatibility ကိုသေချာ post-ထုတ်လုပ်မှု။ အဆိုပါရလဒ် / i (Intelligent) နည်းပညာဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ / i စီမံကိန်းကိုထိုကဲ့သို့သောမျက်ဝန်းအဖြစ်, (တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ဝေးလံခေါင်သီ readout ကဲ့သို့) အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပို့ဆောင့်စိတ်ကူးနှင့်အတူစတင်ခဲ့ရ၏ အာရုံ; လယ်ကွင်း၏အတိမ်အနက်ကို; hyperfocal အကွာအဝေး; နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများ (ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ကင်မရာ sensor ကို format နဲ့မှဆက်စပ်ဖြစ်သော - နှင့်အသုံးပြုသူရွေးပါသို့မဟုတ်အလားအလာကင်မရာအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားနိုင်နိုင်ပါတယ်) ၏စက်ဝိုင်း။ သတင်းအချက်အလက်များဒီဂျစ်တယ်တိုင်းဘောင်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောနှင့် metadata အဖြစ်သိမ်းဆည်းထား, မှန်ဘီလူးအနီးရှိကေဘယ် connector ကိုကနေတဆင့်လက်လှမ်း mount နှင့် / သို့မဟုတ် PL ထဲမှာအဆက်အသွယ် / i သဟဇာတကင်မရာများနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့ထပ်တူပြုခြင်း mount နိုင်ပါသည်။
မှန်ဘီလူးထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, ဒီအပေါငျးတို့သမှန်ဘီလူးထဲကဆောင်သွားစေခဲ့ရသည်။ ငါတို့သည်သူတို့လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကင်မရာထဲကစိုက်ပျိုးနိုင်ဘူး။ မှန်ဘီလူးအမျိုးမျိုးသောကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများနှင့်အာရုံခံကိရိယာများအဖြစ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်ခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောရလဒ်များကိုကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ကွန်ပျူတာပါဝါပါရှိသည်။
ဇွဲနှင့်ပြဌာန်းခွင့် (နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်£ 1 လိုင်စင်ကြေး) နဲ့ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းဖြတ်ပြီး / i မြှင့်တင်ရန်နှင့်ယနေ့ရှိပါတယ်ခဲ့တာ 30 / i နည်းပညာမိတ်ဖက်ကျော် - သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် / i နည်းပညာပံ့ပိုးကူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်ကင်မရာ, မှန်ဘီလူး, စောင့်ကြည့်မှု, ဒေတာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်သူအများအပြားအပါအဝင်။ အဆိုပါ protocol ၏ပွင့်လင်းသဘောသဘာဝထုတ်လုပ်သူအခြားလမ်းတစ်ဝှမ်းကသူတို့နည်းပညာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပေါင်းစပ်လျက်နှင့်မနိုငျကွောငျးကိုဆိုလိုသည် - ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီဒေတာကိုစုဆောင်းရန်စံလမ်းရှိသည်, ထုတ်လုပ်သူနေဆဲ၎င်းတို့၏မှန်ဘီလူး၏ထူးခြားသောသဘာဝတရားနှင့်ဒီဇိုင်းထိနျးသိမျးထားနိုငျနေစဉ်သို့မဟုတ် ကင်မရာများ။
ဖြစ်ကြောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများ / i သဟဇာတလေးမှန်ဘီလူးအတွက်အဆက်အသွယ် mount အဖြစ်ပြင်ပဆက်သွယ်ရေး connector ကိုမှတဆင့်တိုက်ရိုက် / i မှန်ဘီလူးစကားပြောနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ / i နည်းပညာမူဘောင်ကိုထောက်ပံ့ပေး; ရရှိနိုင်ပါလုပ်ကင်မရာအချက်အလက်များ၏အတိုင်းအတာကိုယင်း၏ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲကနေတဆင့်ချင်းစီကင်မရာထုတ်လုပ်သူများ၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Post-ထုတ်လုပ်မှုအသင်းများကိုဤမှန်ဘီလူး data တွေကိုအစာကျွေးခြင်းအားဖြင့်, သူတို့အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်ဒါပေမယ့်လည်းဒီဂျစ်တယ်ဒေတာထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်, ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်သေချာနိုင်ပါတယ်မသာအများအပြားဖြစ်စဉ်များထဲကမှန်းဆအလုပ်ကြာ - ထို VFX အနုပညာရှင်တွေထို့ကြောင့်သက်ရောက်မှုဖန်တီးနိုင်ပြီး အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်မြန်နှုန်းပိုမိုတိကျမှန်ကန်ဖြစ်ကြောင်း 3D မော်ဒယ်များ။
အရေးကြီးတာက, မှန်ဘီလူး metadata ကိုဖမ်းယူမှာအားလုံးအစုံအပေါ်သာမန်စစ်ဆင်ရေးမထိခိုက်ပါဘူး။ metadata မှတ်တမ်းတင်ဘာမှစောင့်ကြည့်သို့မဟုတ် manipulate ရန်မလိုဘဲရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတင်အလတ်စားဖို့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခု SD ကဒ်မှဒေတာများမှတ်တမ်းများ; အဲဒီမှာသတ်မှတ်ချက်အပေါ်လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမအထူးကုဖြစ်ကြောင်းနှင့် DP ရှုပ်ထွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ fussing စိုးရိမ်စရာမလိုပေ။
NAB မှာကြေငြာကတည်းကနောက်ထပ်သုံး / i လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ protocol ကိုစံ၎င်းတို့၏အထောက်အပံ့ကိုအချက်ပြပါပြီ။ Zeiss ပြီးသားက၎င်း၏အသစ်အ CP.3 မျက်ကပ်မှန်ထဲမှာ XD အဖြစ်လူသိများ, ဈ / ၎င်း၏ဗားရှင်းပို့ဆောင်သည်, Ambient နှင့် Pomfort မကြာသေးမီက Post-ထုတ်လုပ်မှုမှအစုမှဒေတာများရွှေ့ဖို့လမ်းသစ်များကိုဖွင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ကှတျချရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအမြဲတစ်ကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြုသော format နဲ့, ရုပ်ရှင်-ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Post-ထုတ်လုပ်မှုအသင်းများကိုသူတို့လိုအပ်အရေးပါမှန်ဘီလူးဒေတာများကိုအမိန့်ထဲမှာ, ပိုမိုကျယ်ပြန်စက်မှုလုပ်ငန်းမှ / i ပေးရဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အစုပေါ်နဲ့ post အတွက် metadata ကိုဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ဘုံဘာသာစကား (မဘုံဟာ့ဒ်ဝဲ) အတွက်အရှိန်အဟုန်ကောက်ဆက်လက်အဖြစ် NAB 2017 မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပူးပေါင်း, ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းနီးကပ်လာကြောင်းပန်းတိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြာပါတယ်။
က Les Zellan နည်းပညာဆိုင်ရာပြဇာတ်ရုံထဲမှာမာစတာဘွဲ့နှင့်အတူဂျီ-Mellon University မှဘွဲ့ရခဲ့သည်။ သူ FERCO နယူးယောက်စီးတီးအတွက်ရုပ်ရှင်ပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းကုမ္ပဏီအရောင်းညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လာမတိုင်မီပြဇာတ်ဇာတ်စင်အလင်းရောင်စနစ်များကိုဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ သူကရုပ်ရှင်ကိရိယာများမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရောင်းဖို့ 1979 အတွက် Zellan Enterprises ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
1998 ခုနှစ်, Zellan တေလာ-Hobson ထံမှချက်ပြုတ်မှန်ဘီလူးဌာနခွဲဝယ်ယူခဲ့သည်။ မိမိအပိုင်ဆိုင်မှုအောက်မှာကှတျချစက္ခုဗေဒပုအပါအဝင်များစွာသောဆုရရှိခဲ့ပါတယ်အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်Merit, CINEC ဆုနှင့်တစ်ဦး Primetime သူဟာ Emmy ၏®။
Zellan ရိုက်ကူးရေး၏အမေရိကန် Society ရဲ့တွဲဖက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက, Motion Picture အကယ်ဒမီ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်မှန်ဘီလူးထုတ်လုပ်ခြင်း၏အနုပညာအပေါ်ပို့ချချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကှတျချစက္ခုဗေဒ post ကိုထုတ်လုပ်မှု က Ultra HD ဖိုရမ်	2017-09-07
ယခင်: အင်တာနက်ကိုတစ်ဦး Borderless Service ကိုသိမ်းဆည်းထားပါရန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းဒါဟာင်
နောက်တစ်ခု: EditShare နည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာအဘို့အEmmy®ချီးမြှင့်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "တစ်ဦးကအဆင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာမှန်ဘီလူး Metadata Standardization မှ" ။ http://www.broadcastbeat.com/a-step-closer-to-lens-metadata-standardization/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။